Badhaasni Noobeelii Itoophiyaaf bu’uura seena qabeessadha - BBC News Afaan Oromoo
Badhaasni Noobeelii Ministirri Mummee Abiy Ahimad injifatan biyyattiif bu'uura seena qabeessa ta'uu Waajjirri Ministira Mummee ibsa waaree booda kana kenneen beeksiseera.
"Kun lammiilee Itoophiyaa fi michuuwwan biyyattiif gammachuu guddaadha" kan jedhan dubbi himtuun waajjirichaa Billanee Siyyum nagaa, araarri fi dhiifamni qaama immaamata mootummaa biyyattii ta'uu himan.
Araara Eertiraan dabalataan nageenya biyyaalee akka Sudaan, Sudaan Kibbaa akkasumas waldhabdee Keeniyaaf Somaaliyaa fi Jibuutif Eertiraa gidduu ture akka furamuf tumsa gochuu isaanis yaadachiisan.
Wayita Ministirri Mummee Abiy badhaasicha injifachuun isaanii beeksifamutti Dr Abiy daawwanaa hojiif Itoophiyaa kan jiran Ministira Mummee Sudaan Abdallaa Hamdook walin mariira turan.
Gama biraatin badhaasichi kan lammiilee Itoophiyaa hundaa ta'uu kan himan dubbi himaan Waajjira Ministira Mummee Nugusuu Xilaahun, Dr Abiy Ahimad biyya keessas ta'ee biyyaalee ollaa keessatti nagaan akka jiraatuf hojjechaa fi barsiisaa turuu isaanii himan.
Dabalataan nagaan sadarkaa dhaabbileetti biyyattii keessatti lafa akka qabatuf Ministeera Nagaa fi Komishinii araaraa hundeessun hojiilee mootummaan Dr Abiy Ahimad hojjete keessaa muraasa ta'uu himan.
"Badhaasni Noobeelii Nagaa Ministirri Mummee Abiy Ahimad badhaafaman hojiilee ji'oota 18 darban keessatti hojjetaman osoo hin taanee wantoota gara fulduraatti hojjechuu qabnu kan eeru dha" jechuunis himan Obbo Nugusuun.